Ny Fanavaozana ny Tafik’i Yemen nandrasana efa ela · Global Voices teny Malagasy
Ny Fanavaozana ny Tafik'i Yemen nandrasana efa ela
Voadika ny 28 Desambra 2012 8:33 GMT
Gaga sady faly ireo Yemenis omaly naheno ny momba ireo fanapahan-kevi-dehibe noraisin'ny Filoha Abd-Rabbu Mansour Hadi: maro ireo didim-panjakàna nandrasana ela no nivoaka, anisan'izany ny fizaràna ny tafika ho vondrona lehibe efatra – tafika an-tanety, tafika an-dranomasina, tafika an'habakabaka ary tafika an-tsisin-tany, ary ny fanafoanana ny Fiarovan'ny Repoblika sy ny Sokajim-piarovana voalohany.
Nifaliana nanerana ny firenena ireo didim-panjakàna omaly satria nanatanteraka ny iray tamin'ireo tanjon'ny revolision'i Yemen koa izany, anisan'ny fangatahana manan-danja indrindra ny fandaminana ny tafika taorian'ny nanonganana ny Filoha Ali Abdullah Saleh tamin'ny Febroary. Ny fanalàna an'i Ahmed, zanaky ny filoha teo aloha eo amin'ny toerana maha-Mpiaro ny Repoblika azy, sy Yehya Saleh zanaky ny mpiray tampo amin'i Saleh amin'ny maha-talen'ny Hery Fiarovana Afovoany ary ny Jeneraly Ali Muhsin amin'ny fitantanana ny Sokajim-piarovana voalohany no sakana lehibe indrindra tamin'ny tetezamitan'i Yemen sy ny fananganana tafika matanjaka sy mitambatra.
Mohammed Alasaadi, mpanao gazety Yemeni, mitantana ny kaonty Twitter @Yemen_Updates, dia ni-tweet ny vaovao mafana:
@yemen_updates: #BreakingNews: Nataon'ny Filoha Hadi eo ambanin'ny Ministeran'ny Fiarovana avokoa izay hery mpanatanteraka eo ambanin'ny tafika- ho sampana lehibe mitambatra. #yemen
@yemen_updates: #BreakingNews: Nalàn'ny Filoha Hadi tamin'ny fitantanana ny Fiarovana afovoany ny zanaky ny mpiray tampo amin'ny Saleh, Yehya Saleh. #yemen
@yemen_updates: #BreakingNews: Nalàn'ny Filoha Hadi tsy ho ao anatin'ny rafitry ny tafika vaovao ny zanak'i Saleh tamin'ny Fiarovana ny Repoblika & Ali Mohsen tamin'ny Sokajim-piarovana voalohany. #yemen
I Nasser Arrabyee, mpanao gazety kosa dia nanazava tamin'ny tweet:
@narrabyee: Ny tafik'i Yemen dia ho tafika an-tanety, an-dranomasina, an'habakabaka, ary amin'ny sisintany. Any amin'ireo fizaràn-tafika fito ny tafika an-tanety, anisan'izany ny Fiarovana ny Repoblika & Sokajim-piarovana voalohany.
Nisy lahatsary ahitàna ireo didim-panjakàna vakian'ny mpanolotra vaovao amin'ny teny Arabo navoaka tao amin'ny kaonty Youtube an'i alqershi2011:
Maro ireo Yemeni mpampiasa aterineto no nifaly tamin'ireo fanapahan-kevitra ireo, na dia nitandrina ihany aza ny sasany:
@Afrahnasser: Notsoahan'ny Filoha Hadi ireo anarana ireo nefa mbola tsy fantatra izay hoataon'izy ireo any aoriana! #Yemen
‏@Nefermaat: Ry zalahy, iza no niteny fa tsy hitàna toerana vaovao ao amin'ny tafika i Ahmed Ali sy Ali Mohsen ? Notsoahana mazava sy tamin'ny fomba ofisialy ve izy ireo omaly……? #Yemen
@yemen4freedom: Ity no tena fiatombohan'ny fiafaràn'ny nofy ratsy indrindra nandritra izay 33 taona farany izay tamin'ny politikan'i #Yemen #Hadi
@imothanaYemen: Andro manan-tantara ho an'ny revolisiona sy tetezamitan'i Yemen. Tsy azo ialàna ny fanamboarana ny tafika raha tiana handroso ny firenena. #Hadi
Hafez Bukari, mpanao gazety, dia nanantena fiovàna am-potony kokoa. Nametra-panontaniana izy tamin'ny tweet:
@hafezbukari: GPC sisa no fiarovana lehibe ho an'ny filoha teo aloha Ali Saleh. Ho vitan'ny filoha hadi ve ny handresy an'i Saleh amin'ny GPC? #Yemen
Ireo mpampiasa aterineto hafa kosa dia matahotra ny ho vokany, ary iray amin'izany ireo fahatapahan'ny herinaratra:
@imothanaYemen: Tsy maintsy hamalifaty i Saleh nefa efa tara loatra izao raha hanakana ny fanovàna! #Yemen
@YusraAlA: Maro ireo olona miomana amin'ny fahatapahan'ny herinaratra any #Yemen taorian'ireo didim-panjakàna fanamboarana ny tafika nataon'i #Hadi androany #Yemen lol
Nambara androany alina ireo fanapahan-kevitra lehibe noraisin'ny filoha Hadi momba ny tafik'i #Yemen. Ny fahatapahan'ny herinaratra no tena mampiasa ny saiko.
Ary araka ny efa nampoizina dia nisy nanimba indray ny tambajotran'ny herinaratra tany Mareb androany, ka tanana “tsy fantatra” ihany no nanao izany.
Ni-tweet i Sarah Jamal :
@Sarah_Sanaa: 8 ora tsy misy herinaratra hatramin'izao aty Sanaa.. Ny sazintsika voalohany taorian'ny didim-panjakàna omaly momba ny fanamboarana ny tafika #Yemen
Maro ireo Yemenis no faly sahirana androany. Sady tsy afaka mifaly noho izao dingana lehibe nataon'ny Filoha Hadi izao, no tsy afaka miahiahy momba ny ho tohiny ary manontany tena ra tena fandroahana ny havan'i Saleh amin'ny tafika izao na fanovàn-toerana fotsiny…. ny tantara no hitsara.